မီးတောင်များ - အဘယ်ကြောင့်သူတို့တည်ရှိနေပုံ၊ ၎င်းတို့မည်သို့ဖွဲ့စည်းသည်၊ အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အမျိုးအစားများ ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
Claudi casals | | မိုးလေဝသ, နည်းလမ်း
အဆိုပါစကားလုံးကိုယ်တိုင်က မီးတောင်, ရောမ Vulcano မှလာသည်ထို့နောက် Vulcanus ကဆိုသည်။ သူသည်ရောမများလက်ခံခဲ့သောဂရိဒဏ္myာရီမှဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဂရိသည်ဒဏ္myာရီတွင်မီးနှင့်သတ္တုများ၏ဘုရားသခင် Hephaestus လုပ်ဆောင်သောအလုပ်များမှထွက်ပေါ်လာသည့်သံပူနှင့် Lava တို့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ရှေးခေတ်ဘယ်တော့မှနားမလည်နိုင်သည့်အရာမှာ၎င်းတို့တည်ရှိနေရခြင်း၊ ချော်ရည်မှလာသည့်အရာနှင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်သာတည်ရှိသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ပိုမိုနာမငြိမ်ဖြစ်စေမည့်အရာများဖြစ်သည်။
3.1 Strombolian မီးတောင်
3.3 Vulcanian မီးတောင်
3.4 Peleano မီးတောင်
3.5 Phreatomagmatic မီးတောင်
မီးတောင်များ (ငလျင်များနှင့်တူသည်) ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာမြေသည် ၁.၂၂၀ ကီလိုမီတာရှိသောငလျင်တိုင်းတာချက်များအရအစိုင်အခဲအခြေအနေတွင်တည်ရှိသည်။ နျူကလိယ၏အပြင်ဘက်အလွှာသည်အစိုင်အခဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောအချင်းဝက် ၃၄၀၀ ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိသည်။ ချော်ရည်များတွေ့ရှိသောဝတ်လုံကိုထိုနေရာမှလာသည်။ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။ ၇၀၀ ကီလိုမီတာမှ ၂၈၈၈ ကီလိုမီတာအထိနက်သောဝတ်လုံနှင့်ပျမ်းမျှအထူ ၅၀ ကီလိုမီတာနှင့် ၇၀၀ ကီလိုမီတာမှအပေါ်ယံလွှာအထိမြင့်သည်။
ဒါကြောင့်အသွင်အပြင်, အခေါက်၏ဒါကြောင့်မထင်ရပေမည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကြီးမားသောပြားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် ချက်မှာမဟာသို့မဟုတ် lithospheric ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု။ ဤသည်အပေါ်ယံလွှာလုံးဝယူနီဖောင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုသည်။ အဆိုပါပြား basalt ဝတ်လုံအပေါ် floatချော်ရည်ဘယ်ကလာသလဲ၊ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတိုက်ကြီးပျံ့လို့ခေါ်တယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောပြားများနှင့်သူတို့ရရှိသောဖိအား၏ညှနျကွားမှု (Source: Wikipedia)
ဤရွေ့ကား, ထိုကဲ့သို့သောပျံ့အက်ကွဲပါရှိသည်နှင့်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာအများဆုံးသိသာဖြစ်ကြသည်။ မီးတောင်ကြီးများသည်သမုဒ္ဒရာ၏အောက်ခြေကို ဖြတ်၍ သမုဒ္ဒရာအလယ်ပိုင်းကုန်းမြင့်များဖြစ်သည်။ ဤကြီးမားသောတောင်တန်းများကိုအငြင်းပွားဖွယ်ရာမီးတောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤအအက်ကွဲတစ်လျှောက်ကီလိုမီတာထောင်ပေါင်းများစွာရှည်လျားသော၊ ပစ္စည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဝတ်လုံကနေပေါ်ထွက်လာနေသည်။ ဤပစ္စည်းသည် longitudinal bands နှစ်ခုအတွင်းသို့လျှောကျသွားပြီးကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အသစ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်သည်။ ချက်မှာတုံနီကျောက်ပြားအကြားကွာဟချက်သည်ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်မဟုတ်ဘဲသမုဒ္ဒရာများရှိရာနေရာများရှိသည်။ ထိုနေရာသည်မီးတောင်များ၏မူလအစဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာ၏အကျဉ်းဆုံးဒေသများတွင်မဟာဗျူဟာပြားပြားတွေ့ဆုံရန်ရှိရာ။
အလှည့်ကျဇုံဟုခေါ်သောခေါ်ယူခြင်းတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပျက်စီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်းချက်ချင်းမဟာသံပြားများသည်စာသားအတိုင်း "ကပ်ထားခြင်း" မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအချို့သောအပြားများသည်အခြားသူများအောက်တွင်နစ်မြုပ်။ ဝတ်လုံနှင့်ပေါင်းစည်းသောနေရာများရှိသည်။ ပြားများ၏ဤပြည်ထောင်စုဒေသများကသူတို့ကိုရှိသည်သောကြီးမားဖိအားရှိသည် ကြီးမားသောငလျင်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ငလျင်နှင့်မီးတောင်များဖြစ်ပေါ်လာသည်.
San Andreas ပြတ်ရွေ့, California, United States
ရေငုပ်သင်္ဘောများသည်မတည်မငြိမ်ဆုံးဒေသများဖြစ်သည်။ ခြွင်းချက်အနေနှင့်သမုဒ္ဒရာအောက်ခြေတွင်တွေ့ရသောဤအကြမ်းဖက်မီးတောင်အချို့သည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်သို့တက်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အိုက်စလန်ကျွန်းကဲ့သို့မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကျွန်းများကိုသူတို့ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အများဆုံးတည်ငြိမ်မှုမရှိသောဒေသများသည်ပန်းကန်တစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုပေါ်တွင်စီးနင်းနေသောနေရာများသို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျော်ကြားသော San Andrésအမှားကဲ့သို့ဘေးတိုက်ပွတ်တိုက်ရင်တောင်ဒေသများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြေကြီးထဲတွင်နက်ရှိုင်းစွာဆက်တိုက်တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်မျက်စိမမြင်ခြင်းဖြင့်အလွန်မှတ်မိနိုင်သည်။ ကြီးမားသောငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်များကထိုဒေသတွင်ငလျင်ကြီးတစ်ခုဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည် Big တစ်ခု.
နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ် ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ကျောက်လွှာ၏အတွင်းပိုင်းဇုန်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒီနေရာမှာကျောက်ထုသည်မျက်နှာပြင်သို့မတက်မီဖိအားများအောက်တွင်တည်ဆောက်သည်။ ၎င်းသည် ၁ ကီလိုမီတာမှ ၁၀ ကီလိုမီတာအကြားဖြစ်သည်။
မီးဖို မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမြင့်တက်လာသည့်ကျောက်တွင်းသည်ချော်ရည်ဖြစ်သည်။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲပြီးနောက်၎င်းသည်အအေးကျောက်ဆောင်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်၊
မီးတောင်ကန်တော့ချွန်: ဒါဟာမီးတောင်ပတ်ပတ်လည်ပေါ်ပေါက်သောခြင်းကိုကန်တော့ချွန်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထုတ်လုပ်သောထုတ်လွှတ်သောပစ္စည်းများစုဆောင်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။
မီးတောင် ၎င်းသည်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်သို့ရောက်သောကျောက်သည်တွင်းထွက်ဖြစ်သည်။ မီးတောင်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္veryာန်သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ၎င်းသည် corrus ပုံစံသို့မဟုတ် inverted cone ဖြစ်နိုင်ပြီးမီတာအနည်းငယ်မှကီလိုမီတာအထိရှိသည်။
ရေပူစက် ၎င်းတို့သည်မီးတောင်ငယ်များကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းရေငွေ့များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အိုက်စလန်နဲ့တူဒေသများအတွက်အလွန်ပုံမှန်။
စကူ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပေးသောအအေး fumaroles ။
အပူချိန်၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အဏုနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများအားလုံးအတူတကွပျော်ဝင်နေသောဒြပ်စင်များအားလုံးသည်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုအမျိုးအစားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းနှင့်အတူမတည်ငြိမ်သောထုတ်ကုန်ပမာဏနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားနိုင်သည်။
မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေသောပစ္စည်းများအစားထိုးသောအခါ၎င်းသည်အစပြုသည်။ သူတို့ကအရည်ချော်ရည်များနှင့်အစိုင်အခဲပစ္စည်းများအလွှာအလွှာကန်တော့ချွန်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ချော်ရည်များသည်အရည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်များစွာသောနှင့်အကြမ်းဖက်ဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်ကာဗုံး၊ ဓာတ်ငွေ့များအလွယ်တကူထုတ်လွှတ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြာမှုန်သို့မဟုတ်မှုန်ရေမွှားများမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ဘယ်တော့လဲ ချော်ရည်များ၏အနားလျှံ တောင်စောင်းများ၊ အများကြီး extension ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းမရှိဘဲ, ဟာဝိုင်ယီအမျိုးအစားမီးတောင်များတွင်ဖြစ်ပျက်သော။
Strombolian လိုပဲ ချော်ရည်အတော်လေးအရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်ပေါက်ကွဲနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုမရှိပါ။ ဤဖြစ်ရပ်တွင်ချော်ရည်၏မီးစွန်းများမှချော်ရည်များဖုံးလွှမ်းသောအခါမီးတောင်၏တောင်စောင်းများကိုအလွယ်တကူဆင်းနိုင်သည်။ ကြီးမားသောဒေသများသိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်ကြီးစွာသောအကွာအဝေးခရီးသွားလာ။ ဤအမျိုးအစားမီးတောင်များသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောတောင်စောင်းများဖြစ်ပြီးလေမှလွင့်မျောနေသောအကြွင်းအကျန်များကိုလေတိုက်ခတ်သောအခါသူတို့သည်ပုံဆောင်ခဲချည်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အလွန်မတ်စောက်သောမတ်စောက်သောကန်တော့ချွန်နှင့်အတူ Vulcanus မီးတောင်မှလာအမည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လွှတ်သောချော်ရည်များသည်အလွန်အရည်ပျော်။ လျင်မြန်စွာခိုင်မာစေသည်။ ဤမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမျိုးသည်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုသည်အလွန်အားကောင်း။ ချော်ရည်ကိုမှေးမှိန်စေသည်။ ၎င်းသည်ပြာများစွာကိုထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းကိုလေထဲသို့ပစ်ချသောအခါအခြားအပိုင်းအစများပါသောပစ္စည်းများနှင့်အတူလိုက်ပါစေသည်။ အပြင်ဘက်သို့ထွက်သောချော်ရည်ဖြစ်သောချော်ရည်များသည်လျင်မြန်စွာခိုင်မာစွာတည်ရှိသည်။ သို့သော်ထုတ်လွှတ်သောဓာတ်ငွေ့များသည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ကိုအက်ကွဲစေသည်။ ဒါကအလွန်ကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောစေသည်။
ဒီမီးတောင်အမျိုးအစားမှာ ၎င်း၏ပေါက်ကွဲမှုမှချော်ရည်အထူးသဖြင့်ထဲမှာပါတဲ့နှင့်လျင်မြန်စွာခိုင်မာအောင်။ ၎င်းသည် crater အားလုံး ၀ ဖုံးအုပ်ကာкелип၊ Python သို့မဟုတ် needle ပုံစံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤသည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ဓာတ်ငွေ့၏မြင့်မားသောဖိအား လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲမှု Python ကိုရုတ်သိမ်းခြင်း (သို့) တောင်စောင်းထိပ်ကိုဖြတ်ခြင်း။
Peleano မီးတောင်၏ဥပမာတစ်ခုမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သောeရာမမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွင်တွေ့ရသည် တောင်ပေါ်မှာပေလီအပေါ်မေလ 8, 1902။ အပူချိန်မြင့်မားစွာစုဆောင်းရရှိသောဓာတ်ငွေ့များနှင့်ပြာများရောနှောထားသောမီးတောင်၏နံရံများသည်ထိုကဲ့သို့သောတွန်းအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ Martinique ကျွန်းရှိစိန့်ပီယဲလ်ကိုထိခိုက်စေပြီးဟန်ချက်ညီစေနိုင်သည် ၂၉,၉၃၃ ဦး သည်မီးတောက်လောင်နေသောမီးတောက်ကြောင့်ဖြစ်သည်.
Surtsey ကျွန်း, အိုက်စလန်။ တစ် ဦး phreatic မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကနေထ။ Erling aflafsson ၏ဓာတ်ပုံ
Phreatomagmatic မီးတောင်တွေ့ရှိခဲ့သည် ရေတိမ်ပိုင်း၌International Hydrographic Organization မှရေတိမ်ပိုင်းဟုခေါ်သည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ crater ထဲမှာရေကန်တစ်ခုတည်ရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံ atolls တွေ၊ သမုဒ္ဒရာသန္တာကျွန်းများကိုဖွဲ့စည်းကြသည်။ မီးတောင်၏စွမ်းအင်ကိုလျင်မြန်စွာအပူပေးလိုက်သည့်ရေငွေ့များတိုးချဲ့လာသည် အလွန်အမင်းအကြမ်းဖက်ပေါက်ကွဲမှု။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်ချော်ရည်ထုတ်လွှတ်မှုသို့မဟုတ်ကျောက် extrusions တင်ပြကြပါဘူး။
ပုံမှန်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်မတူသောဤမီးတောင်အမျိုးအစားတွင်၊ ဓာတ်ငွေ့ဖိအားသည်အလွန်ပြင်းထန်သည်၊ အကြမ်းဖက်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုထုတ်လုပ်။ ၎င်းသည်အအေးခံ။ ပြာမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်စေသည့်မီးတောက်တိမ်များကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့သည်မြို့များကိုသင်္ဂြိုဟ်နိုင်သည်.
ထို့အပြင်၎င်းကိုချော်ရည်စီးဆင်းမှု၏ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့်အတူ pyroclastic မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု၏ Alternative ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အလွှာများထပ်တူကျခြင်းကြောင့်ဤမီးတောင်များသည်အလွန်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီဥပမာကောင်းကို Teide မှာပြထားတယ်။
အခုမီးတောင်ဆိုတာငါတို့တွေ့ပြီ၊ သူတို့ကငါတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှာသာတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတိပြုပါ။ ဤဖြစ်စဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်လည်းနေအဖွဲ့အစည်းနှင့်စကြဝuniverseာတစ်ခုလုံးရှိအခြားဂြိုလ်များနှင့်ဆင်တူချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနေ့အတွင်း၌ဖိအားများအောက်တွင်ပါ ၀ င်သော magma များထွက်ပေါ်လာသည်။ ဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်ကြည့်ငါတို့ရဲ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်နဲ့၊ မိမိကိုယ်ကိုပင်တူညီတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ "ငါတို့အားလုံးမှာမီးတောင်တစ်လုံးရှိတယ်။ အရာအားလုံးကိုသိမ်းထားတယ်၊ တစ်နေ့ကျတော့ငါတို့အားလုံးကိုချက်ချင်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်" ပဲ။
ဘာလဲသိလား တက်ကြွမီးတောင် ဘာတွေထူးလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » မီးတောင်များ